Kenya: Uhuru oo 55% hogaaminaya iyo Mucaaradka oo diidan | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Kenya: Uhuru oo 55% hogaaminaya iyo Mucaaradka oo diidan
Kenya: Uhuru oo 55% hogaaminaya iyo Mucaaradka oo diidan
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa aad ugu horreeya codadka ilaa iyo hadda la tiriyay ee ee doorashadii shalay oo Talaado ahayd dhacday.
Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya, Raila Odinga ayaa qaadacay natiijada hordhaca ah ee doorashada, iyadoo weli ay socoto tirinta codadkii la dhiibtay.
Raila wuxuu sheegay in aysan ku qanacsaneyn qaabka ay wax u wadaan guddiga doorashada.
Dhinaca kale weli waxaa socota tirinta codadka doorashada Kenya, codadka horudhaca ee ilaa iyo imika la tiriyayna waxay muujinayaan in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku horreeyo boqolkiiba konton iyo shan codadkii la tiriyay.
Guddiga doorashada waxaa kale oo ay shegeen in la tiriyay saddex meelood labo meel goobihii ay dadka ka dhiibteen codadka.
Sida ay muujinayaan tirooyinka ka soo baxaya xarunta dhexe ee natiijada guddiga doorashooyinka, illaa toban milyan iyo bar cod ayaa la tiriyay marka aan warkan daabacaynay, waxayna labada musharax ee ugu muhiimsan kala heleen, Uhuru oo heysta 55% boqolkiiba, iyo Odinga oo heysta 44%.
Guddiga doorashada ayaa ku booriyay shacabka inay ka dhowrsugaan natiijada kama dambeysta, waxaana welii guud ahaan dalka Kenya ka socda tirinta codadka doorashada.
Mar uu ka hadlayay dib u dhaca meelaha qaar ee ay sababeen xaaladaha cimilada ,waxaana uu sheegay in ay dowlada diyaar u tahay in ay gacan siiso guddiga doorashada.
Waxaa uu ku dooday in ay jiraan foomam aan sax aheyn, sidoo kalena mishinada cod bixinta qaar ay shaqeyn waayeen, waxaa uu xusay in uu ku gacan seyrayo natiijada soo baxday ee illaa iyo hada la soo bandhigay
Previous articleSomalia to hold national consultations on the constitution review
Next articleDeg Deg: Baarlamaanka Soomaaliya oo meel mariyay Sharciga Isgaarsiinta